Ixesha kunye nabahlobo 36
Kutheni inkozi isetyenziswe njengempawu yeentlanga ezahlukeneyo?
Kusenokwenzeka ukuba izizathu ezahlukeneyo ziye zaqhubela phambili ukuthathwa kwekhozi njengomfuziselo zizizwe ezininzi ezamkeleyo. Nangona kunjalo kunokucingelwa ukuba ithathiwe kuba yayifanekisela ubunjani kunye nomgaqo-nkqubo, amabhongo, umgangatho wezizwe eziye zawuthwala njengomgangatho wazo.
Ukhozi ngukumkani weentaka kunye nomoya, njengoko ingonyama kuthiwa inobubele phakathi kwezilo. Yintaka edla inyama, kodwa enokoyisayo. Yintaka enyamezelo enkulu, ekwaziyo ukukhawuleza kunye nokubaleka okude. Itsiba ngokukhawuleza lixhoba, liphakame ngokukhawuleza, kwaye lifike ngobungangamsha kwiindawo eziphakamileyo ezinkulu.
Isizwe sinqwenela amandla, unyamezelo, inkalipho, ukukhawuleza, igunya, amandla. Ukhozi lunazo zonke ezi zinto ukuya kwinqanaba eliphezulu. Kusengqiqweni ukucinga ukuba ezi zezinye zezizathu ezikhokelele izizwe okanye izizwe okanye abalawuli ukuba bamkele ukhozi njengomgangatho wabo. Inyani yile yokuba ibiluphawu lwamazwe amaninzi awoyisayo ngeli xesha lethu Imbali, ngakumbi abo baqhuba imfazwe kumgama omkhulu.
Ezi ziimpawu zokhozi. Kodwa izizwe ezamkela le ntaka zibe luphawu lwazo, zihlala zilungele okanye zikhethe ubunjani bayo ethile okanye injongo yayo okanye efanelekileyo nokuba zizinto ezihamba kunye neziqhulo okanye ngokubeka uphawu kwimikhono yokhozi okanye ngomlomo wayo, njengesebe, iintolo, iflegi, ikhaka, intonga, umbane, nganye iyodwa okanye idityaniswa neminye imifuziselo yempawu zesizwe okanye iimpawu ezithandwayo sisizwe kunye neenjongo zaso.
Yonke le nto ivela kumbono osebenzayo kunye nezinto ezibonakalayo. Kukho olunye uphawu lwokhozi apho iimpawu ezifanayo zinokuthi zijongwe kumbono wokomoya ngakumbi.
Ngomnye wezinto ezi-4 eziPhilayo ezichazwe kwi-Apocalypse ekuthiwa zimi zijikeleze itrone kaThixo. Ukhozi lubelwe ukuba luphawu lweScioio seZodiac. Kufanekisela amandla okomoya akumntu. Ukhozi lulutsha, amandla okomoya emntwini anokuphakama ade afike kweliphezulu. Isizwe okanye indoda ethatha ukhozi njengophawu lwamoya wokomoya ijolise ekufumaneni ngendlela yokomoya konke oko kumelwa lukhozi ekufanekisweni kwayo nezinto ezibonakalayo. Ujonge ukunqoba kuko konke okungaphantsi kwakhe kwaye usebenzisa amandla akhe ukunyukela kwiindawo eziphakamileyo. Ngokwalathisa la mandla amelwe yokhozi, ungoyisi kwiminqweno yakhe, ufumana igunya kwimimandla yomzimba wakhe enyuka kuwo kwaye, njengokhozi, wenza ikhaya lakhe ezintabeni zomzimba ngaphezulu komlomo wesibeleko. Ke unyuka evela kwi-Scorpio yomqondiso, esona siphelo esisezantsi somqolo, siye phezulu, esikhokelela entloko.
Ngaba i-ukhozi ephakamileyo ngoku sele isetyenziswa njengombonakalo wesizwe wamazwe athile, kwaye ifunyenwe kwizikhumbuzo zamaHiti zasendulo ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, zibhekiselele kwimeko yomntu?
Xa ukhozi oluneentloko ezimbini lusetyenziswa njengophawu lwesizwe ngamanye amaxesha luyenzelwe ukuchaza phakathi kwezinye izinto ezinqwenelekayo, ukuba amazwe amabini okanye amazwe amanyene njengamntu mnye, nangona kungabakho iintloko ezimbini kurhulumente. Ngaphandle kokuba eminye imiqondiso ihamba ngokhozi oluphindwe kabini kwizikhumbuzo zamaHeti akudala, olu phawu alunakubhekiselela kwindoda engu-androgynous. Indoda androgynous okanye indoda eyabelana ngesondo eyahlukileyo, kufuneka ibandakanye imisebenzi emibini, amandla amabini eempawu ezichaseneyo. Ukhozi oluphindwe kabini luyafana kwindalo, njengoko zombini iintloko ziziokhozi. Kwindoda androgynous ukuba imelwe ngokhozi, ukhozi lufanele ukuba luhambe kunye okanye lunxibelelane nengonyama, ethi, nangona ikwindawo eyahlukileyo, imele phakathi kwezilwanyana into ekhozi phakathi kweentaka. IiRosicrucius zakudala zazithetha “ngeGazi leNgonyama ebomvu,” ezazithetha ngayo iminqweno, okanye indalo yezilwanyana emntwini. Baye bathetha nge "Gluten ye-White Eagle," apho babethetha amandla amandla e-psycho-ngokomoya emntwini. Ezi zimbini, ligazi lengonyama ebomvu, kunye ne-gluten yokhozi olumhlophe, batsho, bafanele badibane kwaye bathethe kwaye batshatele, kwaye kwimanyano yabo iya kuphuhlisa amandla amakhulu. Oku kuvakala ngathi yimingxunya engenanto yenyanga ngaphandle kokuba uphawu luyaqondwa. Xa oko kunjalo, kuya kufikelelwa ukuba babeqonda ngakumbi malunga nenkqubo yemizimba kunendlela abanikwe ngayo.
Igazi lengonyama ebomvu ngumnqweno osebenzayo ophila egazini lomzimba. I-gluten yokhozi elimhlophe kukwinkalo yalo yokuqala ye-lymph emzimbeni. I-lymph ingena entliziyweni kwaye nokudityaniswa kunye negazi. Ukusuka kolu manyano kuzalwe elinye igunya elinyanzelisa isizukulwana. Ukuba le mpembelelo iyaneliseka, iiAlchemists zathi, ukuba ingonyama ibe buthathaka kwaye ukhozi luphulukane namandla okunyuka. Ukuba, nangona kunjalo, i-gluten yokhozi olumhlophe kunye negazi lengonyama ebomvu kufuneka ziqhubeke zixubene kunye ngaphandle kokuya ekuziphathiseni, ingonyama iya komelela kwaye ukhozi lunamandla, kwaye amandla azelwe ngokutsha ukusuka ekuncomeni kwawo kuya kunika ubutsha emzimbeni nasekomeleleni kwingqondo.
Ezi zimbini, ingonyama kunye nekhozi, zifanekisela ezi migaqo-nkqubo mibini, eyindoda kunye nenkangeleko yomntu kwimbonakalo yengqondo. I-androgyne yenye eneempawu zesini kunye nokusebenza kwendoda. Ingonyama kunye nekhozi, igazi kunye ne-lymph, zihamba emzimbeni ofanayo kwaye zenza imisebenzi yazo ukuvelisa amandla amatsha ngaphakathi komzimba kwaye ngaphandle kokunikezela kwimpembelelo yokubonakaliswa kwangaphandle, zenze amandla amatsha omzimba azalwe kuwo entsha enokuthi, njengokhozi, inokuphakama emhlabeni kwaye inyuke yaya kwiindawo eziphakamileyo.